FIRMWARE BIOS ကိုဂရပ်ဖစ်ကဒ် - BIOS ကို - 2019
VGA BIOS ကို firmware ကို
ယနေ့ခေတ်ဗိုင်းရပ်စ် ပို. ပို. သာမန်အသုံးပြုသူများအများ၏ကွန်ပျူတာများကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း, များပြား Anti-virus software ကိုရိုးရှင်းစွာသူတို့နှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်လို့မရပါဘူး။ ထိုအခါလေးနက်ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်နိုင်ပါတယ်သောသူတို့အဘို့ကျနော်တို့ပိုက်ဆံများသောအားဖြင့်ကြီးမားတဲ့ပေါင်းလဒ်ပေးချေရန်ရှိသည်။ ဤအခြေအနေများအောက်တွင်, ကောင်းတစ်ဦး antivirus ကိုဝယ်ယူမကြာခဏသာမန်အသုံးပြုသူအဘို့စျေးကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအခြေအနေကိုအတွက် output ကို, တစ်ဦးတည်းသာ - သင့်ရဲ့ PC ပြီးသားကူးစက်လျှင်ဗိုင်းရပ်စ်ကိုဖယ်ရှားရန်အခမဲ့ utility ကိုအသုံးပြုပါ။ ဤအရာတစျခုမှာ Kaspersky ဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားရေး Tool ကိုဖြစ်ပါတယ်။
Kaspersky ဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားရေး Tool ကို - မတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်နှင့်သင့်ကွန်ပျူတာကနေဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသောအလွန်ကြီးစွာသောအခမဲ့ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအစီအစဉ်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ Kaspersky Anti-Virus ကိုအပြည့်အဝဗားရှင်းအပေါငျးတို့သ features တွေကိုပြသရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာကို real-time ကာကွယ်မှုများကိုပေးစွမ်းသာတည်ဆဲဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားပေးမထားဘူး။
သင် utility ကို Kaspersky Virus အား run သောအခါဖယ်ရှားရေး Tool ကိုသင်၏ကွန်ပျူတာစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှအဆိုတင်သွင်း။ ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ခြင်းအတွက် setting များ ( "ပြောင်းလဲခြင်း parameters တွေကို") ကိုပြောင်း, သငျသညျ scan ဖတ်မည်အရာဝတ္ထုများ၏စာရင်းပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ၎င်းတို့အနက်စနစ်မှတ်ဉာဏ်, startup မှာဖွင့်လှစ်ကြောင်းအစီအစဉ်များ, Boot တက်ကဏ္ဍများနှင့် system disk ကို။ သင်တစ်ဦးကို PC ကို USB-drive ကိုထည့်သွင်းသောအခါ, ထိုနည်းတူ scan ဖို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ဒီက "Start scan က" ခလုတ်ကိုနှိပ်လိမ့်မယ်ပြီးနောက်အကြောင်း, "Start ကိုစကင်" ဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်ဆောင်မှုစဉ်အတွင်းဧည့်သည်မည်သည့်အချိန်တွင်ဤဖြစ်စဉ်ကိုစောငျ့ရှောကျနိုငျသညျနှငျ့ "စကင် Stop" button ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ကြောင့်ရပ်တန့်။
AdwCleaner အဖြစ်, Kaspersky ဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားရေး Tool ကိုကြော်ငြာပစ္စည်းများနှင့် High-grade ကိုဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနှင့်အတူရုန်းကန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ဒီ utility ကို AdwCleaner ထဲမှာမဖြစ်သောတစ်ဦးလို့ခေါ်မလိုချင်တဲ့အစီအစဉ်များကို (ဒီနေရာမှာ Riskware ကိုခေါ်), ကို detect ။
အစီရင်ခံစာကြည့်ရှုရန်, သင်သည် "လုပ်ဆောင်နေဆဲ" ဟုအဆိုပါလိုင်းအတွက်စကားများ "အသေးစိတ်ကို" ပေါ်တွင် click လုပ်ရပါမည်။
သင်အစီရင်ခံစာဖွင့်လှစ်သည့်အခါ, သင်သည်ထိုသူတို့အပေါ်တစ်ဦးဗိုင်းရပ်စ်စာရင်း, သူတို့ရဲ့ဖော်ပြချက်များနှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှအရေးယူမြင်လိမ့်မည်။ ဒီတော့ခြိမ်းခြောက်မှု, ( "Skip") ချန်လှပ် Quarantine ( "quarantine မှကူးပါ") သို့မဟုတ် ( "ဖျက်ပစ်ပါ") ကိုဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ, ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်ရန်အောက်ပါလုပျဆောငျရမညျ:
တိကျတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများအတွက်ရရှိနိုင်လုပ်ရပ်များ၏စာရင်းထဲတွင် ( "ဖျက်ပစ်ပါ") "ကိုဖျက်" ကိုရွေးချယ်ပါ။
ခလုတ်ကို "Continue" သို့မဟုတ် "Continue" နှိပ်ပါ။
အနိမ့်မှုစနစ်လိုအပ်ချက်များကို - အခမဲ့ disk space ကို 500 MB အထိ, 512 MB RAM, အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု, 1 GHz အမြန်နှုန်း Processor, မောက်စ်သို့မဟုတ် touchpad ကိုအလုပ်လုပ်၏ရှေ့မှောက်တွင်။
Microsoft က Windows XP Home Edition နဲ့စတင်ပြီးလည်ပတ်မှုစနစ်များအမျိုးမျိုးများအတွက်သင့်လျော်သော။
စနစ်ကဖိုင်တွေကိုကာကွယ်မှု Erase နဲ့ false positives တားဆီး။
အဘယ်သူမျှမရုရှားဘာသာစကား (အင်္ဂလိပ်ဗားရှင်းသာဆိုက်သက်ဆိုင်) ။
Kaspersky ဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားရေး Tool ကိုအဘယ်သူ၏ကွန်ပျူတာအားနည်းခြင်းနှင့်အကောင်းတစ်ဦး antivirus ကိုသို့မဟုတ်မည်သည့်ဝယ်ဖို့ငွေမရှိသောဆွဲထုတ်ဖို့အလုပ်လုပ်လို့မရဘူးအသုံးပြုသူများအတွက်အမှန်တကယ်အသက်သွေးကြောဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့-to-အသုံးပြုမှု utility ကိုသငျသညျခြိမ်းခြောက်မှုများအမျိုးအစားအားလုံးကိုအပေါ်တစ်ဦးအပြည့်အဝ system scan ကလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်စက္ကန့်၌သူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ သငျသညျ Kaspersky ဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားရေး Tool ကိုသုံးပြီး system ကိုစစျဆေးဖို့ဥပမာတချို့ကိုအခမဲ့ antivirus ဆော့ဖ်ဝဲ, Avast Free Antivirus ကို install နှင့်အခြိနျမှနျမှလျှင်, သင်ဗိုင်းရပ်စ်များ၏ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများကိုရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။
ဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားရေး Tool ကိုအခမဲ့ Download
McAfee ကဖယ်ရှားရေး Tool ကို Kaspersky Anti-Virus ကို install လုပ်နည်း Junkware ဖယ်ရှားရေး Tool ကို ငါဘယ်လိုအချိန်ပေါ် Kaspersky Anti-Virus ကိုပိတ်ထားနိုင်
Kaspersky ဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားရေး Tool ကို - ဗိုင်းရပ်စ်, Trojans ပိုးကောင်များနှင့်အခြားအန္တရာယ်ရှိတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနဲ့ကူးစက်ကွန်ပျူတာများ၏ကုသမှုများအတွက်အခမဲ့ဗိုင်းရပ်စ်စကင်နာ။
ရေးသားသူ: Kaspersky Lab မှ
Size: 100 MB အထိ
ဗီဒီယို Watch: Sony TV Firmware Update Tutorial - How to Download and Install Sony TV Firmware Update (စက်တင်ဘာလ 2019).